SHANDISA CHROME ZVIDIMBU KUTI GADZIRIDZA INDIVIDUAL ZVIKAMU - NYORO
Shandisa Chrome Zvidimbu kuti Gadziridza Individual Zvikamu
Shandisa Chrome Zvikamu kuti Gadziridza Individual Zvikamu: Vazhinji vedu tinoshandisa Google Chrome seyedu default browser uye mazuva ano yave fanano yeinternet. Google iri kuyedzawo kugadzirisa ruzivo rwevashandisi, ivo vanoramba vachivandudza chrome. Iyi yekuvandudza inoitika kumashure uye kazhinji, mushandisi haana kana zano maererano neizvi.
Asi, dzimwe nguva uchishandisa chrome unotarisana nenyaya senge adobe flash player haina kugadziridzwa kana yako chrome ikabondera. Izvi zvinoitika nekuti chimwe chezvinhu zve chrome chingangodaro chisati chave kusvika. Kana chako chrome chikamu chisina kugadziridzwa chakanangana neGoogle Chrome, idzi nyaya dzinogona kumuka. Muchikamu chino, ini ndiri kuenda kukuudza mashandisiro aungaita maComputer eComputer Kuvandudza Zvakasarudzika zvemunhu, chii chiri kukosha kwechikamu che chrome uye nemabatiro aungaite yako chrome nemaoko. Ngatitangei nhanho nhanho.
Chii chinonzi Chrome Zvikamu?
Maitiro Ekuvandudza Google Chrome Nemaoko?
/ Maitiro Ekuvandudza Chrome Chinhu?
Chrome zvikamu zviripo zvekuita zvirinani kushanda kweGoogle Chrome uye kugadzirisa ruzivo rwevashandisi. Zvimwe zvezvinhu zve chrome ndezvi:
Chinhu chega chega chine chinangwa chayo chakatarwa. Ngatitorei muenzaniso we Widevine Zvemukati Kuchekesa Module kana uchida kutamba Netflix mavhidhiyo mubrowser yako. Ichi chikamu chinouya mumufananidzo nekuti chinopa mvumo yekutamba vhidhiyo ine Dhijitari Kodzero. Kana chikamu ichi chisina kuvandudzwa, yako Netflix inogona kupa iko kukanganisa.
Saizvozvo, kana iwe uchida kumhanyisa chaiwo masayiti mu browser rako zvingangoda Adobe Flash Player kumhanyisa imwe API yemasaiti avo. Senge iyi nzira, chrome zvikamu zviri kutamba chikamu chakakosha kwazvo cheGoogle Chrome kushanda.
Sezvo isu tichiziva kuti google chrome inogadziridza inoitika otomatiki kumashure. Asi chero nzira kana iwe uchida kugadzirisa iyo google Chrome nemaoko kana iwe uchida kutarisa kuti yako Chrome browser yave kusvika pari zvino kana kwete iwe unogona kutevedzera nhanho idzi:
1. Kutanga, vhura Google Chrome browser mune yako system.
2.Ipapo enda kubhawa rekutsvaga uye utsvage chrome: // chrome .
3.Zvino peji rewebhu richavhurika. Izvi zvinopa ruzivo nezve iyo yekuvandudza yebrowser yako. Kana bhurawuza rako rikavandudzwa rinoratidza Google Chrome yazvino kana zvisina kudaro Tarisa uone kugadzirisa ichaonekwa pano.
windows 10 yekuwedzera kukwidziridzwa kwakundikana
Kana ukangovandudza browser, unofanira kutangazve browser kuti uchengetedze shanduko. Zvakadaro, kana paine nyaya dzine chekuita senge browser kuparara, adobe flash player inodiwa. Iwe unofanirwa kugadzirisa chrome chinhu zvakajeka.
Chidimbu che Chrome chinokwanisa kugadzirisa zvese zvine chekuita nebrowser yatakambokurukura nezvayo pakutanga. Izvo zvakachengeteka kwazvo kugadzirisa manyore chrome chinhu, hauzotarisana nemamwe matambudziko mubrowser. Kuti uvandudze chrome chinhu, unofanirwa kutevera aya matanho:
1.Zvezve, vhura Google Chrome mune yako system.
2. Ino nguva iwe yaunopinda chrome: // zvikamu mubha yekutsvaga yebrowser.
mhanyisa isusu scan uye gadzirisa
Chose chikamu chinozoonekwa pane inotevera peji rewebhu, unogona kusarudza chinhu uye wozvivandudza zvinoenderana nezvinodiwa zvakasiyana.
Ndinovimba matanho ari pamusoro apa aibatsira uye ikozvino unogona nyore Shandisa Chrome Zvikamu kuti Gadziridza Individual Zvikamu, asi kana uchine chero mibvunzo zvine chekuita nedzidziso iyi saka inzwa wakasununguka kuvabvunza muchikamu chemashoko.
windows 10 ratidza zvigunwe zvemufananidzo
chrome yakamira kushanda windows 7
irql zvishoma kana kusaenzana
windows haigone kuratidza siginicha yedhijitari yeiyi faira
maitiro ekuwana macomputer icon pane desktop mune windows 10